Minista Intanet - Chineke dị ebube
Onyenwe anyị Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile dị ebube n'ihi na Ọ bụ Chineke dị egwu. Eluigwe na ụwa apụghị ịbanye Ya n'ihi na Ọ karịrị ihe niile anyị na-ahụ ma mara na anyị bụ. Ebube ya dị ebube ma ike ya enweghị atụ. Nna anyị nke eluigwe dị nsọ, ịhụnanya Ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Amamihe ya karịrị nghọta mmadụ niile. Eluigwe na ụwa nọgidere na-abụ abụ otuto Ya n'ihi na O ruru eru.
Ọ dịghị onye ọzọ dị ka Onyenwe anyị n'ihi na Ọ bụ n'ezie Eze nke ndị eze na Onyenwenụ ndị nwenụ. Ndị mmadụ ga-achọ udo n'oge ọgba aghara, ma ha ga-achọta ya ma ọ bụrụ na ha na-achọ Prince nke Udo. Ezi udo sitere n'aka Onyenwe anyị Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile na udo Ya karịa nghọta niile. Jiri obi gi nile chọọ Onyenwe anyi ma mara na O nwere ike iru gi. Chineke bụ maka gị, Ọ gaghị ahapụkwa gị ọbụna mgbe ị na-ata ahụhụ site na ọnwụnwa na nsogbu. Atụla egwu maka Onyenwe anyị nọnyeere gị, O kwesịkwara otuto gị.
Chineke ghọrọ onye n'ime anyị site n'aka Jizọs, sitekwa n'ọbara ya, anyị aghọwo ndị ruru eru maka Chineke n'ihi na Ọ sachapụwo mmehie anyị. Nna anyị nke eluigwe gbapụtara anyị site n'aka Nwa Atụrụ ahụ. Ayi edoro ayi n'onye ezi omume n'aha nke Jisos Kraist na nime Mo Nso nke Onyenwe ayi Chineke nke puru ime ihe nile. Jisos Kraist ibu isi isi nkuku tinyewo onye obula n'ime ulo uku di ebube nke di kwa ebe obibi nke Chineke nime Mo Nso. Nna anyi di nsọ kwesiri oge na oru gi n'ubi vine nke Onyenwe anyi.
Tụkwasị Jehova obi na obi gị niile ma mara na Ọ ga-eme ihe. Mara mgbe niile na ọ bụghị naanị gị ka ndị Mmụọ ozi nke Onyenwe anyị na-ejere ndị ga-enweta nzọpụta. Onyenwe anyi huru gi n'anya, ya na gi no. Ònye nwere ike iguzogide Onye-nwe nke usuu nile nke ndi agha? Ọ dịghị onye nwere ike na ọ dịghị onye ga-eme. Nwee obi uto na ị mara na Onye Mbụ bụ Onye na-akwado gị. Toonụ Onyenwe anyị Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile n'ihi na O kwesiri.
Nzukọ Kraist nke Kraịst nabatara gị ka anyị soro Onyenwe anyị fee anyị. Anyị nọ ebe a iji jeere Chineke ozi ma nyere gị aka na ije gị na Onyenwe anyị. Gaa na chọọchị nke Kraịst nọ n'ógbè gị.
Maka ihe kpatara Kraist,